दलित हुनुको पीडा : बेहुला र बेहुली बन्न हिँडेका दुबैको गयो ज्यान | Ratopati
personप्रेम सुनार exploreकाठमाडौं access_timeजेठ १२, २०७७ chat_bubble_outline1
बुटवल । दुई दिन यता दलित समुदायका एक युवा र एक किशोरीले चरम जातीय विभेदको ज्यादती खेप्दै अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । प्रदेश ५ को रुपन्देही र कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा दलित समुदायका एक युवा र एक किशोरीले अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जातीय विभेदको ज्यादतीको शिकार हुनुपरेको हो ।
यता, किशोरीका बाबु वलिराम पासीले भने छोरीको हत्या गरि सुनियोजित रुपमा रुखमा लगेर झुण्ड्याइएको दावी गरे । यस घटना वडाध्यक्ष चौधरी कै कमजोरीका कारण घटेको दलित अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।
अहिले चौरजहारी ईलाका प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेका १२ जना मध्येका कार्कीले भने, 'नवराज उमेरमा मेरो दाजु पर्छन् । उहाँ र ठकुरी थरकी केटीसँग प्रेम सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाह थियो । शनिवार साँझ त्यही केटी लिन जाँदैछौं आउनुप-यो भनेर बोलाएपछि हाम्रो टोलबाट ६ जना गयौँ । त्यहाँ पुग्दा अरु १० जना जम्मा भइसकेका रहेछन् । त्यसपछि अरु तीन जना थपिए पछि १९ जना भएर गयौँ । सबैलाई दाई ( नवराज ) ले बेहुली लिन जानुप-यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।'
'मैले ती युवतीको घर देखेको थिएन । उनलाई चिनेको भने थिएँ । उनको घरदेखि तलबाट बाटोमा पुग्न साथ माथि घरबाट एक्कासी एउटी महिला चिच्याएको आवाज आयो । साला फेरि आए डुमहरु...... तिमीहरुलाई आज मारेरै छाड्नुपर्छ भन्दै चिच्याएपछि अरु दुई तिन जना मानिसहरु देखिए,' उनले भने, 'उनीहरुले माथि घरबाट ढुंगा मुढा गर्न थालेपछि हामी भाग्यौँ । रात परिसकेको थियो । त्यसक्रममा पछाडि फर्केर हेर्दा गाउँ नै उर्लिएर आएको देख्यौँ । दायाँबायाँ लुक्ने भाग्ने ठाउँ थिएन । भेरी नदीतिर भाग्यौँ । १९ जना मध्ये भेरी नदीमा हाम्फाल्ने ११ जना थियौं । ५ जना नदी तर्न सफल भयौं ।
'त्यतिबेला तिम्रो बाबुआमाले स्वीकार गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले सम्झाएका हौं,' दिदी सरिताले भनिन् ,' केही हुन्न हाम्रो बुवा पनि माओवादी हो । जातपातको कुरा गर्नु हुन्न । अहिले भर्खरै हामीले विवाह गर्दैनौं, ८ वर्षपछि गर्ने हो भन्दै थिइन् ।'
ति किशोरीका बाबुले पनि आफूले जातीय कारणबाट उनीहरुको सम्बन्ध टुटाउन नचाहेको बताए । उनले भने, 'त्यसो होइन छोरीको उमेर भर्खर अहिले १७ वर्षको भयो । यसपाली एसईई दिने तयारीमा छ । त्यसैले मैले अहिले विवाह नगर भनेको हुँ ।'
'केही दिन यतादेखि ती दुई बीचको सम्बन्ध टाढिएका थियो । उसको फोन ब्लक गरेर बसेकी थिइन् । उसले बोलाएर होइन, उनीहरु आफै आएका हुन् । गाउँलेहरुलाई मेरी श्रीमतीले नबोलाएको भए यत्तिका जन जुटेर आएकाहरुले हामीलाई नै मारेर फल्थे । त्यसैले गाउँले लखेट्ने क्रममा आफै भेरी नदीमा हामफालेको हुन्,' उनको यस्तो जिकिर थियो ।
छोरी र उनको सम्बन्ध पहिल्यै छुटिसकेको उनको भनाइ थियो । ती किशोरीले पनि आफुले नबोलाएको दावी गरिन् । ‘मैले बोलाएकी होइन ऊ आफै आएको हो । मेरा उससँग सम्बन्ध थियो । फागुन महिनामा म उसको घरमा बस्न गएकी पनि हुँ । म सरी भन्छु । हो केहि समयसम्म म उसँग नजिक थिएँ तर पछि मन परेन र छाडेकी हुँ,' उनले भनिन् ।
मृतक नवराज बिककी आमाले आफूले पनि ती किशोरीलाई घरमा आउँदा निकै सम्झाएको बताइन् । 'तिमीहरु ठकुरी ठूला जातका हामी दलितसँग विवाह गर्न राम्रो हुन्न भन्दा पनि दुबैले मानेनन् । म शनिवार घर भएको भए मैले जानै दिँदैन थिएँ । पहिला गयो र प्रहरीलाई बुझाए फेरि त्यस्तै गर्लान् भनेर मैले रोक्ने थिएँ । त्यो केटीले लिन बोलाएकी छ जाऊँ भनेछ र साथीहरु लगेर गएछ । त्यो केटीको घर नपुग्दै मेरो छोरालाई गाउँलेहरुले घेर्दै कुट्दै गरेर भेरी नदीमा फाले छन्,' नवराजकी आमाले भनिन् । उनले केही दिनअघि मात्र घरमा नवराज र ती किशोरी बीच फोनमा कुरा भएको सुनाइन् ।
'मेरो बाबु आमाले अन्तै बिहे गराइदिन लागेका छन् । पेटमा छ भन्दै थिइन् । यताबाट छोराले मेरो बच्चा मलाई चाहिन्छ । अरु मलाई केही चाहिँदैन भन्दै थियो,' उनले भनिन् ।
'एउटा मात्र छोरा थियो । प्रहरीमा भर्ती हुन थालेको थियो । हामी गरिब दलित हौं । उनीहरु ठकुरी त्यो केटीसँग सम्बन्ध राख्न छाड भनेकै हौं । तर मानेर अहिले ज्यानै हाली दिए,' बाबु मुनलालले भने ।
May 26, 2020, 12:01 a.m. जीवन प्रतीक्षा पौडेल
Tara Baral को फेसबुक बाल बाट यता यस्तो छ खास के हो ? 🤔🤔🤔 राष्ट्रपतिसम्म पुर्याइदिनुहोला! समाचार अनुसार केटाकै भयंकर गल्ति छ!(रुकुम घटना) गल्ति ढाकछ‍ोप गर्न जातिकरण नगरियोस्! अर्काकी नावालक छोरी खोस्न 20 जनाको ग्याङ लिएर अाक्रमण गर्न जाने केटा जुनसुकै जातको भए पनि त्यसलाई खेद्न मात्रै हैन मार्न पनि पाउनुपर्छ छोरी जन्माउने बाबुअामाले! पहिचानवादीका नाममा जातिय द्वन्द गराउन धेरै केटाहरु उद्दत छन्,यो घटनामा बाहुन सरापेकाछन्,राज्य किन मौन छ??? जातिय पहिचान भन्छन्,अन्तरजातिय बिहे पनि भन्छन्,पागलहरु! भोलि मेरा जातका केटाले यसै गर्यो भने मैले जातको पक्ष लिने कि सहि गलत क्रियाकलाप हेर्ने!? जातिगत निर्णय गर्ने भए कानुन किन चाहियो? यो कुरामा जातिकरण बढि गरिएकोछ! केटा पक्षकै भयंकर गल्ति छ! अर्काले जन्माएर ,हुर्काएर,बढाएर,पढाएर गरेकी छोरीको सुरक्षाका लागि बाबुअामा लर्नै नहुने? छोरीहरु अर्काका छोराका लागि मात्रै जन्माएका हौं हामीले ?हाम्रा लागि चाहिं हैनन् छोरीहरु??? १७बर्षिया केटीले प्रेममा फसेकी भए भागेर जान्थिन्, भागेर गएर फर्काएर ल्याएको भए पनि नावालक फर्काउन र लाने जवानलाई जेल हाल्न पाइन्छ! वलात्कारीहरु खुकुलो कानुन पाएर बढि उन्माद पोख्दैछन्, गल्ति लुकाउन जातिय अारोप लाउदैछन्! मेरी छोरी खोस्न कोहि गुण्डा लिएर अाउछ भने मैले छोडिदिनुपर्ने? 20 जनाले बाटैमा वलात्कार गरेर मारिदिए भने रुन मात्रैका लागि हो कारवाही र बाबुअामा??? अदालतले नावालक घटनालाई हेर्छ कि जातियता हामी पनि हेर्दैजाउं! मेरी छोरीलाई उमेर नपुगी खोसेर वयस्क तन्नेरीले मेरो इच्छा विपरित लान्छ भने 20 बर्ष पछि भए पनि मैले त्यो केटालाई कानुनी रुपले काट्न पाउनुपर्छ,अनि रोकिन्छ बालविवाह!कानुन चाहिँ सरकारको लभलेटर हो??? कि अन्तरजातिय चाहिँ बच्चै चोर्न खुल्लै दिनुपर्ने??? मार्नुपर्ने मान्छे अाफैं मरेछ,धिक्कार छ नरकहरुलाई! अरु १९ जनालाई खोजेर जेल हालियोस्! यो घटनामा सरकारले जातिगत दया देखाएमा भोलि सरकारको संविधान मात्रै हैन,महिलामन्त्री समेत जल्नेछन्, खबरदार! बाबुअामाले जन्माएर हुर्काएका छोरी लान बाबुअामालाई प्रमाणित जानकारी चाहिने र बिना जानकारी लगेमा,गएमा उमेर पुगे पनि दुवैलाई जेल हाल्ने सम्विधान बना सरकार,विवेक छ भने! उमेर पुगेर भाग्न पाउने कानुनले गर्दा बलात्कारीहरु धेरै मातिसके! लगेको देखे २/४दिन पालेर डिभोर्स,कसैले नदेखे वलात्कार गरेर हत्या,कति सजिलो छ रांगाहरुलाई!???